Pataidzokera Koowheel Electric skateboard kuenda chero - Jomo Technology Co., Ltd
Pataidzokera Koowheel Electric skateboard kuenda chero
Mune ano nokutsanya upenyu, vakawanda chena chipika, panze mabasa wakanaka kutombofara kwevhiki. Kouya mubvunzo: sei vanogona kuenda vakabvumirana kunzvimbo? KOOWHEEL Electric skateboard richava wakanakisisa kusarudza kuti mufashoni nevakomana avo nevasikana. Zvinonzi Zvinoreva kuti havana kutambura kubva kuwandisa kwemotokari mumigwagwa nokutora bhazi guta, kunyange kure ungana pevhu. avo vechidiki vanovenga kuti. Kana ukasarudza munhu skateboard sikuta, unogona kunakidzwa kwevhiki enyu anoshamisa uye kuita zvauri kuda. Kwakadaro sezvo Climb, Play nhabvu kunyange Pick mastrawberry. Kwete chete akanakidzwa inofara kwevhiki asi akanatsiridzwa ukama neshamwari. Saka, Ride Koowheel Electric skateboard ichava yakanaka kusarudza. Sei Uchasarudza Koowheel E-skateboard ?
Chekutanga, ndicho chinonyanya risingadhuri yemagetsi skateboard ane nyore replaceable bhatiri rongedza. Kwaita chete yakagadzirwa ne brushless, hunyambiri mu-vhiri nomusimboti Motors,MAKARALI USB Wireless kure kuzvidzora uye 7 akaturikidzana ose yakasimba Canadian mumeporo kuchinja. Kunonyanyisa nokukurumidza wayo 40km / h uye kunakidzwa rusununguko kuenda zvapo muguta yaunosarudza pasina guzzling gasi kana iratidzike seiri kubuda kubva zvose kufamba kana cu. You kunyange unogona akaiisa muhomwe kuenda kwese, regai zvinhu panze oga kana kofi imba.
The Koowheel yemagetsi skateboard akasikwa nyore kufunga kuti munhu wose anofanira kukwanisa kunakidzwa nyore kuti zvemichina pave. Hatina kufunga kuti yemagetsi skateboard rinongova chitoyi kwenguva geeks shoma. Mune ramangwana, zvichava hachizi itsva nzira chimiro chokufambisa. Ndiyo imwe motokari simba-kuchengetedza. Zvirokwazvo kusarudza itsva pfupi rokuti pakufamba kuenda kwaaishanda, kuenda kirasi, kuti Supermarket uye nokuda chokufamba uye kunotenga? Chii chaigona kuva zvinoshamisa kupfuura kukwanisa kufamba akasununguka guta? Zviri nyore kuti kuchovha kupfuura dzose skateboard. Uchishandisa kure kuzvidzora zvose zvaunazvo kuita kumira bhodhi uye kunakidzwa chokufambisa.